Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato imaatinka HBO Max ee Spain | Wararka Gadget
Miguel Hernández | 09/09/2021 13:07 | Filimaan iyo taxane, Guriga
HBO Waxay suuqa ku jirtay si ay u fidiso bixiyeyaasha waxyaabaha maqalka maqalka ah muddo dheer, gaar ahaan bixinta adeegyadeeda aadka loo doonayo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira sababo badan oo dadka isticmaala ka dhiga inay ka cararaan adeegga Spain sababtuna tahay tayada muuqaalka oo hooseeya iyo codsigiisa oo liita, wax aakhirka noqon doona taariikh.
HBO waxay ku dhawaaqaysaa imaanshaha Spain ee adeegga HBO Max, waxaan ku tuseynaa dhammaan waxa ku jira iyo isbeddelada ay tahay inaad tixgeliso si aad ugu raaxaysato adeegga. Nala soco sida ugu badan ee looga faa'ideysan karo HBO Max oo aad uga faa'ideysato madal -weynaha leh hagaha qeexan.
1 HBO Max iyo imaanshihiisa Spain
2 Ka waran diiwaangelinteyda HBO ee hadda?
3 Isbeddelada iyo qiimayaasha masraxa HBO Max
4 Maxay noqon doontaa buugga HBO Max ee Spain?
HBO Max iyo imaanshihiisa Spain
Adeegga HBO Max ayaa in muddo ah laga isticmaalayay dalal kale sida Mareykanka Ameerika oo tan horeba way u lahaayeen website -kaaga Spain. Sida laga soo xigtay HBO lafteeda, adeeggu wuxuu ku siinayaa sheekooyinka ugu fiican Warner Bros., HBO, Max Originals, Comics DC, Shabakadda Kartuunka iyo waxyaabo kaloo badan, oo wada jira markii ugu horreysay (ugu yaraan Spain). Wax shaki gelin doona qaar ka mid ah adeegsadayaasha, laakiin ha ka welwelin, maxaa yeelay waxaan u nimid inaan xallino dhammaan shakiga soo bixi kara.
Diyaar u noqo inaad ku jeclaato madal cusub oo qulqulaya oo ka soo degi doonta Spain Oktoobar 26 -keeda #HalaaHBOMax pic.twitter.com/VwU0s9bawM
Waxa ugu horreeya waa in la caddeeyo in nuxur ahaan Oktoobar 26 -keeda dambe waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato HBO -da caadiga ah sida inta kale ee wax -soo -saarka WarnerMedia oo ka bilawda hal madal iyada oo aan qandaraasyo adeegyo kala duwan loo marin bixiyeyaasha telefishanka fiilada caadiga ah sida Movistar, iyo kuwo kale.
Isla mar ahaantaana HBO Max wuxuu imaan doonaa Spain, Sweden, Denmark, Norway, Finland iyo Andorra Oktoobar 26 -keeda. Goor dambe, ballaarinta ayaa ka sii socon doonta Portugal, oo ka mid ah waddamada kale, in kasta oo taariikhahaas aan weli la xaqiijin.
Ka waran diiwaangelinteyda HBO ee hadda?
Marka la soo koobo, gabi ahaanba waxba ma dhacayaan. HBO waxay bixin doontaa waqti la qabsi, laakiin nuxur ahaan waxay samayn doonaan waa baaba'ida madal -dhaqameedka HBO, oo hubaal in dad badani indho -indhayn ku waayi doonaan, xogtana si otomaatig ah loogu dari doono HBO Max. Taas macnaheedu waa:
Waxaad ku geli kartaa HBO Max adiga oo wata aqoonsiyadaada HBO (isticmaaleyaasha iyo furayaasha sirta ah)
Xogta waa la kaydin doonaa, waa la kaydin doonaa oo waxa ku jira ayaa dib loo soo saari doonaa meeshii aad uga tagtay
Gaaban, isla Oktoobar 26 koontadaada HBO ayaa si otomaatig ah loogu beddeli doonaa koontada HBO Max waxaadna awoodi doontaa inaad ku raaxaysato dhammaan waxyaabaha ku jira madalkan cusub.
Isbeddelada iyo qiimayaasha masraxa HBO Max
HBO ma xaqiijin in ay jiri doonto kala duwanaansho qiimaha lagu soo rogay dadka isticmaala, run ahaantii, markii adeegga laga wareejiyay HBO ilaa HBO Max ee Mareykanka iyo LATAM ma jirin wax qiimo koror ah.
Xaqiiqdii, iyada oo la tixgelinayo in HBO ay mar hore xaqiijisay in wareejinta akoonnada iyo macluumaadka ay si otomaatig ah u noqon doonaan, Wax walba waxay muujinayaan inaysan jiri doonin kala duwanaansho isqorista. Sidoo kale, haddii aad HBO uga faa'iidaysato dalabyada ay bixiso shirkadda taleefankaaga ama bixiyaha adeegga Internetka, waxba isma beddeli doonaan maxaa yeelay aqoonsigaagu wuxuu ka gudbi doonaa hal madal oo kale.
Maxay noqon doontaa buugga HBO Max ee Spain?
Sidaad horeba u ogayd, HBO waxay qayb ka tahay Warner, sidaa darteed, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku raaxaysanno buug -yarahan HBO marka lagu daro Shabakadda Kartoonka, TBS, TNT, Dabaasha Dadka Waaweyn, CW, Caalamka DC iyo filimada ee shirkadda iyo shirkadaha wax -soo -saarka la xiriira sida Shineemo Cusub oo Cusub. Shaki la'aan, buug -yarahu wuxuu ku kori doonaa baaxad iyo tayo:
The blockbusters ugu weyn, sheekooyinka ugu milgihii, iyo Classics lama ilaawaan ah oo naga dhigay kuwa aan nahay. Wax walba oo ku yaal HBO Max.
Sii -dayntii ugu dambeysay ee Warner: Space Jam: Halyeeyada Cusub
Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin xuquuq taxane ah sida Asxaabta, Aragtida Big Bang ama South Park si ay si weyn u hagaajiyaan liistada.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Guriga » Filimaan iyo taxane » Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato imaatinka HBO Max ee Spain